Amasevisi okuhlola nokuHlela kwesiNgisi ku-Intanethi
Ingabe ufuna isiNgisi esingenamaphutha?
ProofreadingServices.com ingasiza. Sihamba phambili emhlabeni jikelele ekuhloleni nokuhlela kwesiNgisi ku-intanethi, futhi sisebenza nezazi zemfundo, amabhizinisi, njalo nabalobi emazweni angaphezulu kwamashumi ayisishiyangalolunye (90). Noma ngabe ufuna ukuhlola isiNgisi sezezemfundo, sezamabhizinisi, umbhalo wabalobi, noma imininingwane ngawe, ithimba lethu labahloli abaklomeliswa ngezindondo emhlabeni wonke lngakusiza ngezidingo zakho zesiNgisi.
→ [Ingabe ufuna ukubona amanani wethu wookuhlola isiNgisi? Thola ikhwothi yamahhala.]
Ikhwalithi yokubhala kwaakho kwenza ubonwe ngendlela ethile emikhakheni yokusebenza noma wezemfundo. Ukubhala amadokhumenti ngesiNgisi esiqondile kusiza uthuthuke emsebenzini yakho. Abahloli bethu besiNgisi abanobuchwepheshe bazothola amaphutha kuhlelo, ukupela, ukuhlela, ukukhetha kwamazwi, ukwakha umusho, nokunye. Silungisa ukubhala kwakho kwesiNgisi ukuze umsebenzi wakho uthole inhlonipho.
Ingabe amasevisi wethu wookuhlela isiNgisi akufanele?
Ake ucabange ngalokhu: Sowuchithe amahora namahora ubhala i-atikhili yakho ngsiNgisi njalo ufuna ukulithumela kujenali yezemfundo. Kudingeka ukuthi isiNgisi sakho siqonde, njengoba ungafuni ukuhlazeka kozakwenu kwezemfundo. Umnqamulajuqu uyasondela—kusele amahora angu-48. Udinga usizo, futhi uludinga ngokushesha.
Siyazi ukuthi leso simo siphathisana ikhanda. Sesike saba lapho. Yingakho sakhe isevisi yethu yabalula futhi yashesha. Ngabe udinga idokhumenti yakho ibuyiswe ngemuva kwezinsuku ezimbalwa? Ayikho inkinga. Amahora ambalwa? Singakwenza nalokho, futhi.
Sithumele idokhumenti yakho ukhululeke. Sizolungisa konke.
→ [Oda isevisi yokuhlola nokuhlela lapha.]
Uyaziswa: Sinawo futhi namasevisi wookuhumusha. Ungakwazi uku-oda isevisi yokuhumusha lapha.
Ulunge kangakani umsebenzi wethimba lethu lokuhlola isiNgisi?
Abahloli nabahleli bethu banobuchwepheshe bakhuluma isiNgisi njengolimi lokuzalwa futhi banesipiliyoni ngokubhala komsebenzi, ukuhlela, nokuhlola. Iningi labo ngosolwazi besiNgisi nesayensi abathatha umhlalaphansi futhi baneminyaka eminingi yesipiliyoni yokuthumela ama-atikhili kumajenali wezemfundo. Wonke umuntu kwithimba lethu waphasa ekuhlolweni kokuhlola nokuhlela. Siqasha umuntu oyedwa kwabangamakhulu amathathu (300)—siqikelela ukukhetha ukwedlula i-Harvard University. Abahloli bethu bayancomeka emsebenzini abawenzayo, futhi bayakwazi ukulungisa ukubhala kwesiNgisi sakho.
Uyayifuna isampula yamahhala yokuhlola isiNgisi?
Siyazi ukuthi kungenzeka ukude kakhulu kunalapho esikhona kwikomkhulu lethu e-United States, kanti futhi kungenzeka ufune ukubona isampula yomsebenzi wethu ngaphambi koku-oda elikhokhelwayo. Thola isampula yamahhala ukuze ubone ukuthi abahloli bethu bangakusiza kanjani ukuze umbhalo wakho ube ngcono:
→ [Thola isampula yokuhlola yamahhala manje.]
Uyaziswa: Iwebhusayithi yethu ephelele ibhalwe ngeNgisi. Singabahloli besiNgisi, phela!
Usukulungele ukuqala ukusebenza nabahloli kanye nabahleli bethu besiNgisi?
→ [Faka i-oda lokuhlela kwesiNgisi manje.]